Ezi ziividiyo ezili-10 ezijongwa kakhulu kwi-YouTube eSpain ngo-2016 | Iindaba zeGajethi
Ezi ziividiyo ezili-10 ezijongwa kakhulu kwi-YouTube eSpain ngo-2016
Sineentsuku nje ezimbalwa ukonwabela kunye namava kunyaka we-2017, kwaye ngale nto, isishwankathelo sokuqala kunye nokudityaniswa kwento kulo nyaka sizakushiya ngasemva sele iqalile ukufika. UGoogle yenye yezona nkampani zisebenzayo xa kufikwa kushwankathelo lonyaka kwaye ukuba kwiveki ephelileyo usinike ezona zicelo kunye nemidlalo ekhutshelweyo kuGoogle Play, namhlanje yenze esidlangalaleni iividiyo ezijongwa kakhulu zeYouTube ngo2016.
Ukuze singagxili kwiividiyo ezingasinomdla kakhulu kuthi, sigqibe kwelokuba silungelelanise uluhlu lwethu kwaye sikubonise Iividiyo ezili-10 ezijongwa kakhulu kuYouTube eSpain. Ewe ungoyiki yonke into oza kuyibona apha ngezantsi, kuba kukho ividiyo enika okuninzi ukuba ungathetha ngayo, kwaye ayilunganga ncam.
Ukwenza olu luhlu UGoogle uthathele ingqalelo, kwaye awumnqa ngokwaneleyo, ukuthanda okufunyenwe yividiyo, amaxesha ekwabelwana ngawo okanye izimvo ezenziwe ngabasebenzisi. Mhlawumbi bekuya kuba lula ukuthatha nje iividiyo ezili-10 ezijongwe kakhulu, kodwa isigebenga sokukhangela sithathe isigqibo sokubenza nzima ubomi kancinci kwaye sivumele sikhokelwe yiparameter engakumbi.
Apha ngezantsi ungabona iividiyo ezili-10 ezijongwa kakhulu kwilizwe lethu ngo-2016;
1 La Roja Baila (Umhobe osemthethweni weQela leSizwe laseSpain) (Ividiyo yoMculo esemthethweni) -La Roja Baila
2 Los Morancos-Ibhayisekile (Parody) uCarlos Vives, Shakira-Los Morancos Official
3 I-PPAP Pen Ipenapile i-Apple Pen-CHEE YEE Teoh
4 Isibhengezo seLotto leKrisimesi 2016-Disemba 21 [Esemthethweni] -ILottery kaRhulumente kunye noNgcakazo
5 I-Pokémon HEYEYEAH ft. I-Narehop - (Parody «Hey Ewe Ewe Ewe») - elrubiusOMG
6 Iingoma zokulingisa -uRickyEdit
7 Ukuzola okumnandi, ukusuka ePavofrío-Campofrío eSpain
8 Umceli mngeni wokuncwina nentombi yam-uDulceida
9 Ufuna ukwazi loo nto - I-LoRY MoNEY-LOLXDMAFIA CANAL
10 I-100 Burgers-Amadoda ama-5-kwikona yeGiorgio
La Roja Baila (Umhobe osemthethweni weQela leSizwe laseSpain) (Ividiyo yoMculo esemthethweni) -La Roja Baila
Inokumangalisa kwaye kuninzi ividiyo ye-YouTube ebonwa eSpain ngo-2016 Umhobe osemthethweni weqela laseSpain, Kodwa sele siyazi ukuba ibhola ihambisa iintaba. Ukongeza, le ngoma yaqanjwa ngumvelisi weRedOne kunye noNiña Pastori ayivakali imbi kwaphela, kwaye ikwanayo nenxaxheba kaSergio Ramos, into ekungathandabuzekiyo ukuba ithathe isigqibo sokuyiphakamisela phezulu kuluhlu lweevidiyo ezijongwa kakhulu kwi YouTube ngexesha lika-2016.
Los Morancos-Ibhayisekile (Parody) uCarlos Vives, Shakira-Los Morancos Official
UCarlos Vives kunye nebhayisikile kaShakira Alithandabuzeki elokuba yenye yeengoma zasehlotyeni kwaye nangona iklip yevidiyo yayo esemthethweni yenye yeevidiyo ezijongwa kakhulu eSpain, khange ikwazi ukungena kwishumi eliphezulu. ILos Morancos Ngengoma yakhe yengoma ukuba ukwazile ukungena kwisithuba sesibini, esenza abaninzi abantu baseSpain bahleke kwaye balile nokuhleka.
I-PPAP Pen Ipenapile i-Apple Pen-CHEE YEE Teoh
Ndicinga ukuba uninzi lwethu belungathanda ukuba lungaze lufumane le vidiyo kwezona zibukelweyo kwilizwe lethu, kodwa besinokuphantse sitsho ukuba ayinakuphepheka. Sithetha ngayo I-Apple Pen ngePeninapple, apho ndikholelwa ekubeni nantoni na esinokuyithetha ayimfuneko.
Isibhengezo seLotto leKrisimesi 2016-Disemba 21 [Esemthethweni] -ILottery kaRhulumente kunye noNgcakazo
Izibhengezo ze Iloto yeKrisimesi unyaka nonyaka baba yenye yezona ntengiso zijongwa kakhulu kumabonwakude, kwaye kulo nyaka bakwazile ukungena ngokukhawuleza kwiividiyo ezijongwa kakhulu kwiYouTube. Kwimeko apho umntu engekayiboni okwangoku, ngentla nje uyakubona kwaye ukuba awukabinayo ilotto yokuzoba kulo nyaka, khawulezisa kuba kwiintsuku ezimbalwa amagubu aza kuqala ukujikeleza.
I-Pokémon HEYEYEAH ft. I-Narehop - (Parody «Hey Ewe Ewe Ewe») - elrubiusOMG
Ukuba bendingekho kolu luhlu "IRubiyo" into ibiya kuhamba gwenxa kwaye yenye yezona zinto zidumileyo ze-youtubers hayi kwilizwe lethu kuphela, kodwa kwihlabathi liphela. Awumazi okanye awazi ukuba sithetha ngabani?Ukuba impendulo iyalandula, cofa indawo oza kuyidlala kwaye ulungele ukonwabela enye yevidiyo yale ngcungcu kuthungelwano.
Iingoma zokulingisa -uRickyEdit
Ukuba awazi Ukuhlelwa kweRickyAkufuneki uqhubeke nokufunda lo mbhalo, ukuze ungachithi xesha lide kwaye ube nakho ukubona ividiyo esele iphoswe phakathi kwe-10 ejongwe kakhulu eSpain ngoku. Kuyo sinokubona ingqokelela yengoma, esiqinisekileyo ukuba ayiyi kukushiya ungakhathali konke konke.
Ukuzola okumnandi, ukusuka ePavofrío-Campofrío eSpain
E-Spain sithanda iintengiso zikamabonwakude Kwaye umzekelo ocacileyo kukuba iintengiso ezimbini zingene kolu luhlu lweevidiyo ezijongwa kakhulu. Le yile evela eCampofrío, eyabetha uninzi lwethu ngokuba yividiyo yentsholongwane esiyibonileyo sonke okanye phantse sonke, ngeYouTube okanye kwenye indlela, de ibe yintsholongwane.
Umceli mngeni wokuncwina nentombi yam-uDulceida
Dulceida yenye ye-youtubers eyaziwa kwilizwe lethu, ekwanayo nejelo layo likamabonwakude elandelwa ngabantu abaninzi mihla le. Iividiyo zakhe zihlala ziyimpumelelo eqinisekileyo kwaye kule apho enza khona eyona mingeni iphambili kwi-YouTube (Umngeni woKiss), ayinakuba yenye into ngaphandle kweyona vidiyo ibonwayo kwilizwe lethu.
Ufuna ukwazi loo nto - I-LoRY MoNEY-LOLXDMAFIA CANAL
Imali yelory Sele besaziwa kwezinye zeendlela eziqhelekileyo zeYouTube kwaye sele befumene impumelelo enkulu ngezinye iividiyo ezinje ngeSanta Claus kunye neOla k ase. Kulo nyaka bakwazile ukuzibeka phakathi kweevidiyo ezili-10 ezibukelwe kakhulu eSpain kwaye ingcebiso yethu kukuba uyeke ukubetha umdlalo ukuze ube nexesha elimnandi.
I-100 Burgers-Amadoda ama-5-kwikona yeGiorgio
Sithanda izinto zokwenza okuthile kwaye kule vidiyo sinokubona inethamo elikhulu lokuziqhelanisa. Abantu abahlanu bakhuphisana ukubona ukuba ngubani okhawulezayo ukutya ii-hamburger ezingama-20 1-euro eMcDonaldsNgaba uya kuba nakho ukubabetha kwi-duel?
Ngaba sele uzibonile ezinye zezi vidiyo zinceda ukuzenza ezona vidiyo zibukwayo eSpain ngo-2016 kwi-YouTube?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona. Unokuthi usixelele ukuba ucinga ntoni ngevidiyo nganye esiyijongisisile kolu luhlu lukhethekileyo, ngokuqinisekileyo olungekhe lube lolokugqibela esinikwa nguGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezi ziividiyo ezili-10 ezijongwa kakhulu kwi-YouTube eSpain ngo-2016
Insiza kaGoogle ngoku yahlula amakhadi olwazi kwiithebhu ezi-2